Health Insurance - AYA SOMPO Insurance
Vision, Mission , Key Values
Home > Personal Insurance > ကျန်းမာရေးအာမခံ
ဆေးကုသစရိတ်တွေ ပြေလည်ဖို့ ကျန်းမာရေးအာမခံထားကြစို့
MediCare Classic MediCare Premium
MediCare Classic + MediCare Premium +
Eligible Person (Age) Insurance Coverage Benefits (MMK)
6 to 75 years Hospital Cash daily (Maximum 60 days) 50,000
Death benefit 5,000,000
OPD (1 year) Up to 50,000
Surgical cash 500,000
6 to 60 years Hospital Cash daily (Maximum 60 days) 50,000
Critical Illness Disease Treatment 5,000,000
6 to 75 years Hospital Cash daily (Maximum 60 days) 100,000
Death benefit 10,000,000
OPD (1 year) Up to 100,000
6 to 60 years Hospital Cash daily (Maximum 60 days) 100,000
Critical Illness Disease Treatment 10,000,000
အာမခံသက်တမ်းမှာ ပရီမီယံ စတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁) နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်နေ့ ည(၁၂)နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်။
Critical Illness Micro Health Insurance
• အသက် (၆) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်အထိ။
• အသက် (၆) နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အထိအတွက် မိဘ/ အုပ်ထိန်းသူမှ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ (၅) ယူနစ်နှင့်အထက် (သို့မဟုတ်) အသက်သည် (၅၁)နှစ်အထက်အထိဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်မှုကို ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
Eligible Person (Age) Insurance Coverage Benefits (MMK) Unit
6 to 60 years Heart Attack 1,000,000
(per unit) 1 to 10 units
Insurance Type Eligible Person (Age) Event Benefits (MMK)
Micro Health Insurance6to 75 years Hospital cash daily (Maximum 60 days) 5,000
Death due to accident 500,000
• ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက် အသက် ၆ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်အတွင်းရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံခြားသားများလည်း ထားရှိနိုင်ပါသည်။
• အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ အတွက် မိဘ/ အုပ်ထိန်းသူများမှ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်းထားသူများအနေဖြင့် (၆)လနှင့် (၁) နှစ်ပေးသွင်းနိုင်ပြီး အစုအဖွဲ့လိုက်ထားသူများအနေဖြင့် (၁)လ၊ (၃)လ၊ (၆)လနှင့် (၁) နှစ် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
MediCare Classic Individual (MMK) *Stamp Fees - 1,500
Bi-Annual Lump Sum
6-30 58,900 115,500
31-40 67,400 132,000
41-50 75,900 148,500
51-60 103,900 203,500
61-75 187,900 368,500
MediCare Classic Corporate (MMK) *Stamp Fees - 1,500
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 10,400 29,200 56,000 110,200
31-40 11,400 33,200 64,000 125,700
41-50 12,900 37,200 72,500 141,200
51-60 17,900 50,700 99,000 193,700
61-75 31,900 92,200 178,500 350,200
MediCare Classic+ Individual (MMK) *Stamp Fees - 3,000
6-30 81,400 159,500
31-40 106,400 209,000
41-50 137,400 269,500
51-60 198,900 390,500
MediCare Classic+ Corporate (MMK) *Stamp Fees - 3,000
6-30 14,400 40,200 77,500 152,200
31-40 17,900 52,700 101,000 198,700
41-50 23,400 67,700 131,000 256,200
51-60 33,900 97,700 189,500 371,200
MediCare Premium Individual (MMK) *Stamp Fees - 3,000
6-30 109,400 214,500
31-40 126,400 247,500
41-50 143,400 280,500
51-60 199,400 390,500
61-75 367,400 720,500
MediCare Premium Corporate (MMK) *Stamp Fees - 3,000
6-30 19,400 54,200 104,000 204,700
31-40 21,400 62,200 120,000 235,700
41-50 24,400 70,200 137,000 266,700
51-60 34,400 97,200 190,000 371,700
61-75 62,400 180,200 349,000 684,700
MediCare Premium+ Individual (MMK) *Stamp Fees - 6,000
6-30 154,400 302,500
31-40 204,400 401,500
41-50 266,400 522,500
51-60 389,400 764,500
MediCare Premium+ Corporate (MMK) *Stamp Fees - 6,000
6-30 27,400 76,200 147,000 288,700
31-40 34,400 101,200 194,000 381,700
41-50 45,400 131,200 254,000 496,700
51-60 66,400 191,200 371,000 726,700
Critical Illness Individual (MMK) *Stamp Fees - 300 per unit
6-30 4,500 8,800
31-40 7,800 15,400
41-50 12,300 24,200
51-60 19,000 37,400
Critical Illness Corporate (MMK) *Stamp Fees - 300 per unit
6-30 800 2,200 4,300 8,400
31-40 1,300 3,900 7,400 14,600
41-50 2,100 6,100 11,700 23,000
51-60 3,200 9,400 18,100 35,500
Insurance Coverage Age Group Lump Sum
Micro Health Insurance 6-30 5,000
၁။ ဆေးကုသမှုခံယူနေခြင်း၊ ဆေးကုသရန်ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်ကို ရရှိထားခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာရှိပြီးသား ဖြစ်နေခြင်း။
၂။ သားဖွားခြင်း၊ ဗိုက်ခွဲမွေးခြင်း၊ မီးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ခွဲစိတ်ကုသမှု။ သို့သော် အာမခံထားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်နှင့်အာမခံထားချိန်တွင် ပုံမှန်ဖြစ်နေသော ကိုယ်ဝန်ကြောင့်ဖြစ်လာသည့်တွဲဖက်ရောဂါများ(ကိုယ်ဝန်ဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးတိုးရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရောဂါ စသည်တို့) ကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရန်အကျုံးဝင်သည်။ ထို့ပြင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းသည် ရွေးချယ်ထားသည့် အာမခံအကာအကွယ် (၁) ကို ဝယ်ယူထားပါက အကျိုးခံစားခွင့်ပေးချေရန် အကျုံးဝင်သည်။
၃။ စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်း၊ စိတ်ရောဂါဝေဒနာများကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
၄။ ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်ရန်နှင့် အနားယူအားမွေးရန်ဆေးရုံတက်ခြင်း
၆။ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှအပ ဖြစ်သော သွားနှင့်ပတ်သတ်သည့်ကုသမှုအတွက်ဖြစ်ခြင်း
၇။ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှအပ ဖြစ်သော မျက်မှန်အပါအဝင် မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း၊ အမြင်သွေဖယ်ခြင်း၊ မျက်စိကုသခြင်း၊ အမြင်အာရုံ ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ခြင်း
၈။ အလှအပ အတွက်ဖြစ်ခြင်း၊
၁၀။ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်း (သို့) မသန်စွမ်းခြင်း
၁၂။ ကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခြင်း
၁၃။ ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါဖြစ်ခြင်း
၁၄။ အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးခြင်း၊ အဓိအရုဏ်း၊ စစ်နှင့်စစ်အသွင်ဖြစ်ပွါးခြင်း (စစ်ပြုခြင်းများ၊စစ်ပွဲကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ စစ်တပ်(သို့) အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် ဖော်ပြပါအဖြစ်အပျက် တစ်ခုခု၏ တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ နီးကပ်စွာသော်လည်းကောင်း၊ ‌ဝေးလံစွာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေသော၊ အားပေးသော၊ အခြေခံသော၊ ပေါ်ပေါက်သော မည်သည့်မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း)
၁၅။ ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ရက်ပေါင်းသည် ၃ ရက်နှင့်အောက်ဖြစ်သောဆေးကုသမှုများ
၁၆။ လိမ်လည်တောင်းခံသည့် ဖြစ်ရပ်များ
၁၇။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်ကို ဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်‌အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
၁။ ကျန်းမာရေးအာမခံထားမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
ဖြေ။ အာမခံထားမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်၊ Proposal ,checklist တို့လိုအပ်ပါတယ်။ (၄) ယူနစ်နှင့်အထက် ဝယ်ယူသူများ (သို့) အသက်(၅၀) အထက် အာမခံထားသူများအနေဖြင့် Medical Check-up လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ကျန်းမာ‌ရေးနဲ့ ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ၁။ ကျန်းမာရေး အာမခံ
၂။ ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှုအာမခံ
၃။ ကျန်းမာရေးအာမခံမှာ ပေါ်လစီထွက်ရန် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ?
ဖြေ။ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံပြီးနောက် (၁) နာရီ အတွင်း ပေါ်လစီရပါတယ်။
၄။ ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက် ပရီမီယံကြေးက ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
ဖြေ။ ကျန်းမာရေးအာမခံ package (၄) မျိုးရှိပြီး ပရီမီယံကြေးပမာဏသည် အသက်အရွယ်နှင့်ဝယ်ယူလိုသည့် အာမခံ Package ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း‌သော်လည်းကောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့သော်လည်းကောင်း အာမခံထားရှိနိုင်ပါတယ်။ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းပုံမှာ တစ်ဦးချင်းအတွက် (၆)လ၊ တစ်နှစ် ဖြစ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ထားသူများအတွက် လစဉ်၊ (၃)လ၊ (၆) လ နှင့် တစ်နှစ် ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကျန်းမာရေးအာမခံတွင် ဘယ်အချိန်မှစတင်ပြီး ပေါ်လစီအကျုံးဝင်သလဲ။
ဖြေ။ ပရီမီယံကြေး စတင်ပေးသွင်းသည့် အချိန်မှစတင်၍ အာမခံအကာအကွယ် စတင်အကျုံးဝင်ပါတယ်။
၆။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူထားရင် ၁နှစ်အတွင်း လျ်ောကြေးဘယ်နှစ်ကြိမ် တောင်းခွင့်ရှိသလဲ။ လျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း မရှိသောသူများအတွက်လည်း ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ပေးပါသလဲ။
ဖြေ။ ဝယ်ယူထားသော အာမခံ package အရ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးပမာဏအထိ လျော်ကြေးတောင်းခံခွင့် ရှိပါတယ်။ ပေါ်လစီသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး လျော်ကြေးမတောင်းသူများအနေနဲ့ အခြားခံစားခွင့်မရှိပါ။
၇။ ကျန်းမာရေးအာမခံကို သက်တမ်းတိုးလို့ ရနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ သက်တမ်းတိုးလို့ မရနိုင်ပါ။ အာမခံသက်တမ်းကုန်ပြီး သက်တမ်းထပ်တိုးလိုပါက ပေါ်လစီနံပါတ် အသစ်နှင့် နောက်တစောင်ထပ်သွားပါမည်။
၈။ ကျန်းမာရေးအာမခံမှာ နာမည်ပြောင်းလိုပါက ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ကျန်းမာရေးအာမခံတွင် နာမည်ပြောင်းခွင့်မရှိပါ။ အပြောင်းအလဲ (endorsement) လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
၉။ ပေါ်လစီကို ဖျက်သိမ်းချင်ရင် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ပေါ်လစီဖျက်သိမ်းလိုပါက ပရီမီယံကြေး ပြန်ထုတ်မပေးပါ။ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရန် နောက်ကျပါက ပေါ်လစီ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပါမယ်။
၁၀။ အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသလား?
ဖြေ။ အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ပေးပါသည်။
၁၁။ Agent နဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံလုပ်တာနဲ့ လူကိုယ်တိုင် ရုံးလာလုပ်တာ ဘယ်လိုကွာခြားမှု ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ကွာခြားမှု မရှိပါ။ AYA SOMPO အာမခံမှ Customer များအားလုံးကို တူညီသော ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။ AYA SOMPO အာမခံတွင် Door to Door ဝန်ဆောင်မှုရှိတာကြောင့် Customer များအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စိတ်အေးစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ ဘဏ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အာမခံထားမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ Bank နဲ့ချိတ်ဆက်ပီး အာမခံထားချင်ရင်ဧရာဝတီဘဏ်များတွင်ရှိသော Bancassurance များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားပေး၍ အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။
MediCare Classic Individual (MMK) *Stamp Fees – 1,500
MediCare Classic Coporate (MMK) *Stamp Fees – 1,500
MediCare Classic+ Individual (MMK) *Stamp Fees – 3,000
MediCare Classic+ Coporate (MMK) *Stamp Fees – 3,000
MediCare Premium Individual (MMK) *Stamp Fees – 3,000
MediCare Premium Coporate (MMK) *Stamp Fees – 3,000
MediCare Premium+ Individual (MMK) *Stamp Fees – 6,000
MediCare Premium+ Coporate (MMK) *Stamp Fees – 6,000
Critical Illness Individual (MMK) *Stamp Fees – 300 per unit
Critical Illness Coporate (MMK) *Stamp Fees – 300 per unit
Drop your email and submitaform. We will contact you as soon as possible.
No.245, Corner of Maha Bandula Road and 46th Street, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
© 2020 AYA SOMPO.
All rights reserved by AYA SOMPO Insurance Company Limited
Design and developed by Salt & Pixel